1 Ihe E Mere 9 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
1 Ihe E Mere 9:1-44
9 E debara aha ndị Izrel niile n’akwụkwọ dị ka usoro ọmụmụ ha si dị;+ lee, e debara ha n’Akwụkwọ Ndị Eze Izrel. A dọọrọ Juda n’agha+ laa Babịlọn n’ihi ekwesịghị ntụkwasị obi ha.
2 Ndị mbụ lọghachiri n’ihe nketa ha n’obodo ha bụ ndị Izrel,+ ndị nchụàjà,+ ndị Livaị+ na ndị Netinim.+
3 Ụfọdụ n’ime ụmụ Juda+ nakwa ụfọdụ n’ime ụmụ Benjamin+ nakwa ụfọdụ n’ime ụmụ Ifrem na ụmụ Manase biri na Jeruselem:+
4 Yutaị nwa Amaịhọd nwa Ọmraị nwa Imraị nwa Benaị, onye si n’agbụrụ Pirez+ nwa Juda.+
5 N’ime ụmụ Shila,+ Asaya bụ́ ọkpara na ụmụ ya.
6 N’ime ụmụ Zira,+ Jeyuel, na narị mmadụ isii na iri itoolu bụ́ ụmụnne ha.
7 N’ime ụmụ Benjamin, Salu nwa Meshọlam nwa Họdavaya nwa Hasenua,
8 na Ibniya nwa Jeroham, na Ila nwa Ọzaị nwa Mikraị, nakwa Meshọlam nwa Shefataya nwa Ruel nwa Ibnaịja.
9 Ụmụnne ha ndị si n’usoro ọmụmụ ha dị narị mmadụ itoolu na iri ise na isii. Ndị a niile bụ ndị isi nke ndị bụ́ nna n’ụlọ ndị nna nna ha.
10 N’ime ndị nchụàjà, e nwere Jedeya na Jehoyarib na Jekin,+
11 nakwa Azaraya+ nwa Hilkaya nwa Meshọlam nwa Zedọk nwa Mereyọt nwa Ahaịtọb, bụ́ onye ndú n’ụlọ ezi Chineke,
12 nakwa Adaya nwa Jeroham nwa Pash-họ nwa Malkaịja, nakwa Measaị nwa Adiel nwa Jazera nwa Meshọlam nwa Meshilemit+ nwa Ịma,
13 nakwa ụmụnne ha, bụ́ ndị isi n’ụlọ ndị nna nna ha, otu puku mmadụ na narị asaa na iri isii, bụ́ ndị dike nwere ike+ ịrụ ọrụ a na-arụ n’ụlọ ezi Chineke.
14 N’ime ndị Livaị, e nwere Shemaya nwa Hashọb nwa Azraịkam nwa Hashabaya+ bụ́ onye si n’agbụrụ Meraraị;
15 nakwa Bakbaka, Hiresh na Gelal, nakwa Matanaya+ nwa Maịka+ nwa Zikraị+ nwa Esaf,+
16 nakwa Obedaya nwa Shemaya+ nwa Gelal nwa Jedutọn,+ nakwa Berekaya nwa Esa nwa Elkena, bụ́ onye biri n’obodo nta nke ndị Netofa.+
17 Ndị nche ọnụ ụzọ ámá+ bụ Shalọm+ na Akọb na Talmọn na Ahaịman; nwanne ha bụ́ Shalọm bụ onyeisi ha,
18 ruokwa mgbe ahụ, ọ na-anọ n’ọnụ ụzọ ámá eze+ n’ebe ọwụwa anyanwụ. Ọ bụ ndị a bụ ndị nche ọnụ ụzọ ámá nke ebe ụmụ Livaị mara ụlọikwuu.+
19 Shalọm nwa Kore nwa Ebayasaf+ nwa+ Kora+ na ụmụnne ya ndị si n’ụlọ nna ya, bụ́ ụmụ Kora,+ bụ ndị na-ahụ maka ọrụ ahụ, bụrụkwa ndị nche ọnụ ụzọ+ ụlọikwuu, ndị nna ha bụkwa ndị isi ụlọikwuu Jehova, ndị nche ọnụ ụzọ ya.
20 Ọ bụ Finihas+ nwa Elieza+ bụ onye ndú ha n’oge gara aga. Jehova nọnyeere ya.+
21 Zekaraya+ nwa Meshelemaya bụ onye nche ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute.
22 Ndị niile a họọrọ ịbụ ndị nche ọnụ ụzọ dị iche iche dị narị mmadụ abụọ na iri na abụọ. Ha biri n’obodo nta ha dị iche iche+ dị ka usoro ọmụmụ ha+ e debara n’akwụkwọ si dị. Ndị a ka Devid+ na Samuel onye ọhụ ụzọ+ họpụtara ịrụ ọrụ ha nke ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na-arụ.+
23 Ha na ụmụ ha na-ahụ maka ọnụ ụzọ ámá ndị dị n’ụlọ Jehova, ọbụna ụlọikwuu ahụ, iche ha nche.+
24 Ndị nche ọnụ ụzọ ámá na-anọ n’akụkụ anọ ya, n’ebe ọwụwa anyanwụ,+ n’ebe ọdịda anyanwụ,+ n’ebe ugwu+ nakwa n’ebe ndịda.+
25 Ụmụnne ha na-esi n’obodo nta ha dị iche iche abịa, site n’oge ruo n’oge, inyere ha aka, ruo ụbọchị asaa.+
26 N’ihi na e nwere ndị dike anọ n’ime ndị nche ọnụ ụzọ ámá bụ́ ndị e nyere ọrụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na-arụ. Ha bụ ndị Livaị. Ha na-ahụ maka ụlọ iri ihe+ na akụ̀+ ndị dị n’ụlọ ezi Chineke.
27 Ha na-anọbọkwa chi na gburugburu ụlọ ezi Chineke; n’ihi na ha na-ahụ maka ọrụ nche,+ ha na-ahụkwa maka mkpịsị ugodi, ọbụna maka imeghe ụzọ kwa ụtụtụ.+
28 Ụfọdụ n’ime ha na-ahụ maka arịa+ ndị e ji eje ozi, n’ihi na ha na-agụ ha ọnụ wee bubata ha, gụọkwa ha ọnụ wee bupụ ha.
29 Ụfọdụ n’ime ha bụ ndị a họpụtara ịhụ maka arịa dị iche iche na ịhụ maka arịa niile dị nsọ+ na ịhụ maka ọka* e gwere nke ọma+ na mmanya+ na mmanụ+ na frankinsens+ nakwa mmanụ bọlsọm.+
30 Ụfọdụ n’ime ụmụ ndị nchụàjà bụ ndị na-eme ihe otite+ a na-agwa mmanụ bọlsọm.
31 Matitaya, onye Livaị, bụ́ ọkpara Shalọm,+ onye si n’agbụrụ Kora, na-ahụ maka ihe ndị e ji ite eghe,+ nke bụ́ ọrụ onye a pụrụ ịtụkwasị obi na-arụ.
32 Ụfọdụ n’ime ụmụ ndị Kohat, bụ́ ụmụnne ha, na-ahụ maka achịcha a na-edo n’usoro,+ ịkwadebe ya kwa ụbọchị izu ike.+
33 Ndị a bụ ndị ọbụ abụ,+ ndị isi nke ndị bụ́ nna ụmụ Livaị n’ụlọ iri ihe,+ bụ́ ndị a na-ekenyeghị ọrụ ọzọ;+ n’ihi na ha kwesịrị ịnọ n’ọrụ ha ma n’ehihie ma n’abalị.+
34 Ọ bụ ndị a bụ ndị isi nke ndị bụ́ nna ụmụ Livaị dị ka usoro ọmụmụ ha si dị. Ọ bụ ha bụ ndị biri na Jeruselem.+
35 Ọ bụ na Gibiọn+ ka nna Gibiọn, bụ́ Jeayel, biri. Aha nwunye ya bụ Meaka.
36 Nwa ya nke ọkpara bụ Abdọn, ụmụ ya ndị ọzọ bụ Zọọ na Kish na Bel na Nee na Nedab,
37 na Gidọ na Ahayo na Zekaraya+ na Miklọt.
38 Ma Miklọt mụrụ Shimiam. Ọ bụ ha biri na Jeruselem, n’ebe ha na ụmụnne ha biri n’ihu ụmụnne ha ndị nke ọzọ.
39 Ma Nee+ mụrụ Kish;+ Kish amụọ Sọl;+ Sọl amụọ Jọnatan+ na Malkaị-shua+ na Abinadab+ na Eshbel.+
40 Nwa Jọnatan bụ Merib-bel.+ Ma Merib-bel mụrụ Maịka.+
41 Ụmụ Maịka bụ Paịtọn na Melek na Taria nakwa Ehaz.+
42 Ma Ehaz mụrụ Jera; Jera amụọ Alemet na Azmavet na Zimraị. Zimraị amụọ Moza.
43 Ma Moza mụrụ Binia na Refeya,+ Refeya amụọ Eliesa, Eliesa amụọ Ezel.
44 Ezel mụrụ ụmụ isii, ndị a bụkwa aha ha: Azraịkam, Bokeru na Ishmel na Shearaya na Obedaya na Henan. Ọ bụ ndị a bụ ụmụ Ezel.+
^ 1Ih 9:29*
1 Ihe E Mere 9
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D13%26Chapter%3D9%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl